कसरी Google SEO बनाउने सही एसईओ परामर्श सेवाहरू फेला पार्नु हुन्छ?
त्यसोभए, हामी यो जाँच गर्न जाँदैछौँ - एक राम्रो कम्पनी, पूर्ण-स्ट्याक एजेन्सी, वा अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि एसईओ परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्न सम्भव छ - म Google लाई सबैलाई खुशी दिन चाहन्छु।. हो, मैले भर्खरै यस्तो प्रश्न सोधें. र यो एकदम असामान्य रूप मा राखिएको थियो, मलाई सबै पछि स्वीकार गर्नुपर्छ. और हाँ, म यहाँ गंभीर हूँ, मजाक नहीं. यो प्रतीततापूर्ण प्रश्नले सही अर्थ बनाउँछ, प्रायः ती वेबमास्टर्स वा वेबसाइट मालिकहरू जसले सिंहदरबारको साझेदारी द्वारा अप्रत्याशित रूपमा केहि रैंकिंग बढावा गर्न को लागी गहन आवश्यकता मा आफूलाई खोज्न को बारे मा उपेक्षा गर्दछ।. तिनीहरू प्राय: केही योग्य अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरूका लागि केवल खोजी परिणामहरूको सूचीमा उनीहरूको तलको दर्जाको लागि द्रुत समाधानको लागि मात्र बाहिर जान्छन्।. कम से कम उनि त्यो तरिका मा विश्वास गर्छन. केवल Google लाई धन्यबाद गर्न वेबपृष्ठहरूलाई अनुकूलन गर्न र सुधार गर्न व्यक्ति द्वारा अपेक्षित राम्रो एसईओ परामर्श सेवाहरूको बारेमा पहिलो प्रश्न फिर्ता फर्काउँदै. बकवास? जिस्केकाे? यसलाई केहि पनि छैन! अजीब अनुरोध राम्रो साबित भयो, कम से कम हामीलाई खोज अनुकूलन को बारे मा सबै भन्दा अधिक बुझन योग्य बनाउन को लागि.
अप्टिमाइजेशन पराडा. मान्छे वा मेसिनको लागि यो गर्ने?
चाल भनेको हो कि तपाईंको वेब पृष्ठहरु लाई सही समर्थन संग ध्वनि समर्थन संग एसईओ परामर्श सेवाहरु को मतलब छ कि तपाईंको वेबसाइट को शुद्ध मूल्यवान र प्रयोगकर्ता को अनुकूल. अर्कोतर्फबाट, तथापि, यो बिन्दु धेरै व्यक्तिले प्राय: धेरै व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको छ. यसबाहेक, कहिलेकाहीँ तिनीहरू टेक्नोलोजी एसईओ पहलहरूमा मात्र पागल फोकस राख्न टाढा जान्छन्, यसरी यसरी मेशिनको लागि पढाईको लागि पृष्ठहरू पढ्नु. यद्यपि, म यसको बारेमा निश्चित छैन. त्यसोभए, एसईओ परामर्श सेवाहरू विचार गर्दै, प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता अनुभवको बीचमा एक उचित सन्तुलन छ, र "Google लाई धन्य बनाउ". "तर हामी कसरी सम्भवतः एक समयमा दुवै कुरा पाउन सक्छौं? तपाईंको वेबसाइटको लागि सही खोज अप्टिमाइजेसन प्रदायक छनौट गर्नको लागी एक आवश्यक प्रक्रियालाई कल्पना गर्ने प्रयास गरौं. राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि, यसको बारे सबै कुरा कम से कम बुझ्न योग्य छ. तर कस्ता प्रश्नहरू हामीले सही समयको भाडामा लिने प्रश्न सोध्नुपर्छ जुन एक पटकमा खुसी खोज इंजन बनाउन सक्छ? आउनुहोस् कि कसरी सम्भव हुन सक्दछ भनेर हेर्नुहोस्.
एसईओ को सामने राम्रो लक्ष्य राख्नुहोस
कल्पना कीजिए कि तपाईं आफ्नो सबै दलहरु संग, तपाईंको सीईओ वा बोर्ड टीम को सदस्यहरु को साथ बैठे हो, या जो तपाईं संग काम गर्दै छन्. सही? त्यसपछि हामी एसईओ परामर्श सेवाहरू साथ प्राप्त गर्न चाहने प्राथमिक उद्देश्यहरू आकार गर्न प्रयास गरौं. तपाईंले सुरू गर्नु अघि, तपाई किन अहिले तपाइँको हालको प्रोजेक्टको लागि खोजी इञ्जिन अनुकूलन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं किन केवल जैविक श्रेणी निर्धारण गर्न चाहानुहुन्छ SERPs सबैभन्दा प्रासंगिक र कम प्रतिस्पर्धी खोजशब्द वाक्यांशहरूको लागि मात्र? कुन तरिकामा तपाईं साँचो सफलता वा आफ्नो पूर्ण विफलता बीचको भिन्नता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए, यो तरिका र हरियो जस्तो बिना सोच सोच्नु, म एकदम सरल योजनाको प्रयोग गर्दछु - हामी सबै भन्दा राम्रो खराब लक्ष्यहरुको डेलिभेट सबै समय संग भोगिरहेका छन् कि उचित तरिकाले एसईओ परामर्श सेवाहरु को सामने केहि अच्छे लक्ष्यहरु लाई वजन को कोशिश गर्छन।.
म उन मान्छे देखि अधिक यातायात प्राप्त गर्न चाहन्छु, जो मेरो विषय मा रुचि राखछन. मलाई यकीन छ कि उनी यसको खोजी गर्दै छन्. और मलाई मेरो वेबसाइट को बारे मा अधिक सोच को बारे मा अधिक जानकारी को लागी संबोधित गर्न आवश्यक छ. यसैले मलाई एकपटक र सबैका लागि दर्शकहरूको सामनेमा पुग्न ठूलो ट्राफिक चाहिन्छ।
म कम्पनीको राजस्व बढाउने मेरो सबै भन्दा राम्रो गर्दैछु. हाम्रो टोलीले नयाँ बिक्रीको साथ सफल हुन प्रयास गर्दैछ. हामी विश्वास गर्छौं कि एसईओ परामर्श सेवाहरू हाम्रो बिक्री धक्का पार्न लोकोमोटिव पावर हुन्।
हामी व्यापक बजार दर्शकहरूको खोजी गरिरहेका छौं. अब हाम्रो टोलीले नि: शुल्क परीक्षणहरू, साइन-अपहरू, र निःशुल्क डाउनलोडहरूको लागि अधिक महत्त्वपूर्ण वितरणमा बढी काम गर्दैछ।
हामीले हाम्रो कम्पनीको लागि बलियो ब्रान्ड नाम प्राधिकरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ. र हामीसँग धेरै राम्रो समीक्षाहरू छन्, अझैसम्म अझै केही बीमार वा खराब प्रतिक्रिया तल रैंकिङ. हामी सही भावनाहरूलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं र सम्भवतः सबै भन्दा खराब व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिइन्छ. जस्तै हामी जान्दछौं धेरै मानिसहरु हाम्रो ब्रान्ड नाम वा ब्रान्डेड उत्पादनहरूमा रुचि राख्दछन्.
म ट्राफिक, ठूलो यातायात. मलाई यसलाई सबै लागतमा चाहिन्छ, किनकि किनकि सबैलाई यो चाहन्छ, र Google लाई पनि मनपर्छ. त्यो एक भयानक गलती, आफु को एक निचो र शून्य लक्ष्य हुनेछ. सबै पछि, तपाइँले राम्रो भन्न चाहानुहुन्छ कि तपाईले केहि खोज ट्राफिक तथ्याङ्कहरू पाउनुभयो. यदि तपाईं कम्पनीको राजस्व चलाउन राम्रो रूपांतरणको आशा गर्नुहुन्छ, वा जस्तै कि - तपाईंको लागि राम्रो छ. ठीक छ, त्यो गर्नेछ;
तपाईं खोज रैंकिंग को बारे मा सोच रहे हो आफैले काट दिए. तपाईंले यसलाई आफ्नो लक्ष्यको सूचीमा कहिल्यै राख्नुभएन, माथिको सकारात्मक "लक्ष्य" बाट यो टाढाको धेरै कम. सामान्यतया, एसईओ परामर्श सेवाहरूको लागि यो समान रूपमा खराब चिन्ह हो. प्राय: यस्तो, प्रदायक मात्र बन्दर व्यवसायको एक गुच्छा हुनुपर्छ. मेरो मतलब यो धेरै सम्भव छ कि तपाईं एक प्रलोभन देख्न सक्नुहुन्छ, अझै सम्म केहि कठिनाई, हेरफेर प्रविधिहरु को माध्यम ले रैंकिंग मा अब सम्म बढावा बढावा गर्छन या, भगवान नाइट, ब्ल्याक टोपी एसईओ अक्सर यस्तो अनुचित प्रस्तावहरु संग आ रहे हो;
तपाईंको कम्पनीले गम्भीर मार्केट प्रतिस्पर्धामा संलग्न देखा पर्दछ. र त्यहाँ एक विशेष प्रतिद्वंद्वी वाक्यांशको लागि एक विशेष प्रतिद्वंद्वी हो जुन तपाईं सबै खर्चमा छुटाउन चाहानुहुन्छ. तपाईंले यसलाई कम्पनीको वास्तविक उद्देश्यको रूपमा लगाउनु पर्छ, तपाईं एक पटक फेरि एकैचोटि बाटो सार्दै हुनुहुन्छ. तपाईसँग भानु चीजहरूको बारेमा बिर्सनु पर्छ. केवल आफैलाई सोध्नुहोस् - के तपाईँ सिधै तपाइँलाई सिधै केही राजस्व-उत्पन्न परिणामहरू, वा कम से कम सिधै कुनै संगठनात्मक लक्ष्य गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं शंकास्पद हुनुहुन्छ भने, केही समयसम्म पनि, यो सकारात्मक लक्ष्य होइन;
को को हो?. जाँच गर्न समय
खैर, हामी हाम्रो "काल्पनिक परिदृश्य" को दोस्रो भाग छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ सामान्यतया मधुमेह शब्दहरूको रूपमा र जोर-आवाज पनि भद्दा प्रदायकहरूको आवाज उठाउने सही एसईओ परामर्श सेवाहरु संग केहि गर्न को लागी केहि छैन. हाम्रो समापनमा सार्नु र एक छनौट गर्न सुरू गरौं - कि त्यस व्यक्तिसँग व्यवहार गर्ने वा छोटो सूचनामा सम्मेलन हल छोड्ने. आखिर, म विश्वास गर्दछ कि तल एक छोटो मोडेल को लागि सजिलै संग काम गर्न सक्छन्.
तपाईंको डिबटरमा तत्काल जाँच छ, म तपाईले सजिलै संग एसईओ को खोज को अनुकूलन कम्पनी को समझ र दृष्टिकोण को बारे मा जान सकते हो।. स्क्यानरहरूले मौका पाउनेछन्, साथसाथै बेइमानी एजेन्सीहरू, वा एसईओ परामर्श सेवाहरूको कुनै अपमानजनक प्रदायकहरू।. कडा हुनुहोस् र ती मूलभूत कुराहरू सोधेर उनीहरूलाई चिन्ता बनाउनुहोस्, "हे, म जान्न चाहन्छु कि Google ले खोज नतिजाहरू कसरी निर्धारण गर्दछ, र तपाईं तिनीहरूलाई मेरो लागि के गर्न सक्नुहुन्छ?". यो कुराकानी अझै सुचारु हुँदै जाँदै हुनुपर्दछ, अझ छोटो निराशाको सङ्केत बिना, त्यो ठूलो छ. तपाईलाई सुन्न आवश्यक छ केवल एकमात्र सही उत्तर हो, जस्तै "हो, यो Google सम्म छ, यो कसरी सामान छ. र यहाँ छ कि हाम्रो विशेषज्ञहरु रस्साहरु जान्दछन्, र यहाँ हाम्रो टीम कसरी काम गर्न प्रयोग गरिन्छ, र यहाँ हामी के उचित रूपमा लामो समय मा आशा गर्न सक्दछ ". के तपाईंले मिल्दो स्वरलाई ईमानदारीपूर्वक ईमानदार कुराकानीको अनुभव गर्नुभयो? त्यसपछि तपाईं उनीहरूको उम्मेदवारलाई एक अर्का विचार बिना, तपाइँका सबै खोज अनुकूलन गर्नका लागि विचार गर्न निःशुल्क हुनुहुन्छ Source .